Habel a Bible Ka Ne Ho Asɛm, “Ɛwom sɛ Wawu De, Nanso Ɔda so Kasa”| Gyidi a Edi Mũ
“Ɛwom sɛ Wawu De, Nanso Ɔda so Kasa”
1. Dɛn na na ɛmma Adam ne Hawa abusua no ntumi nkɔ Eden turo no mu, na dɛn na na ɛho hia Habel sen biara?
WO DE, fa w’adwene bu sɛ Habel rehwɛ ne nguan a wɔredidi wɔ bepɔw so a biribiara nhaw wɔn. Afei, ebia ɔto n’ani hwɛ akyirikyiri, na ohu sɛ biribi retwa ne ho yerɛwyerɛw. Ná onim sɛ ogya nkrante bi retwa ne ho frɛdɛfrɛdɛ wɔ Eden turo no kwan ano bere nyinaa ma enti na obiara ntumi nkɔ mu. Ɛhɔ na bere bi na anka n’awofo te, nanso afei de, na n’awofo no ne wɔn mma no nyinaa ntumi nkɔ hɔ bio. Fa w’ani bu sɛ saa anwummere no Habel gyina hɔ na mframa nam ne ti ho hoohoo, na afei wama n’ani so rehwɛ soro redwinnwen Ɔbɔadeɛ no ho. Ɛbɛyɛ sɛ na ɔredwinnwen ho sɛ, so Onyankopɔn ne nnipa ntam bɛyɛ yiye bio anaa? Ɛno ne ade a na ehia Habel sen biara.
2-4. Ɔkwan bɛn so na Habel kasa kyerɛ yɛn nnɛ?
2 Ɛnnɛ, Habel kasa kyerɛ wo. Sɛ ɔkasa a, wote? Ebia wobɛka sɛ biribi a ɛte saa ntumi nsi, efisɛ Adam ba a ɔto so abien yi wui nyɛ nnɛ. Wadan dɔte bɛyɛ mfe 6,000 ni. Bible ka awufo ho asɛm sɛ: “Wonnim biribiara.” (Ɔsɛnk. 9:5, 10) Afei nso, Habel anom asɛm biako mpo nni Bible mu. Ɛnde, ɔbɛyɛ dɛn atumi akasa akyerɛ yɛn?
3 Onyankopɔn honhom maa ɔsomafo Paulo kaa Habel ho asɛm sɛ: “Ɛnam ɛno so no, ɛwom sɛ wawu de, nanso ɔda so kasa.” (Monkenkan Hebrifo 11:4.) Dɛn so na Habel nam kasa? Ɔnam gyidi so. Habel ne onipa a odi kan a onyaa gyidi. Ɔkyerɛe sɛ ne gyidi yɛ den paa ma enti ɛnnɛ, abɛyɛ biribi a ɛkasa kyerɛ yɛn, na yebetumi ahwɛ asua. Sɛ yɛhwɛ Habel suasua ne gyidi a, ɛbɛyɛ sɛ nea ɔte ase a ɔrekasa kyerɛ yɛn tẽẽ.
4 Nanso, esiane sɛ Bible nka Habel ho nsɛm pii nti, yɛbɛyɛ dɛn atumi ahu ɔno ne ne gyidi ho asɛm? Momma yɛnhwɛ.
Ɔtenaa Ase Bere a na Nnipa Nnɔɔso Wɔ Wiase
5. Dɛn na ka a Yesu kae sɛ Habel tenaa ase fi “wiase asefi” no kyerɛ? (Hwɛ ase hɔ asɛm no nso.)
5 Bere a Onyankopɔn bɔɔ nnipa no, ankyɛ na wɔwoo Habel. Akyiri yi, Yesu kaa Habel ho asɛm sɛ ɔtenaa ase fi “wiase asefi.” (Monkenkan Luka 11:50, 51.) Ɛda adi sɛ wiase a Yesu kaa ho asɛm no fa nnipa a wobetumi agye wɔn afi bɔne mu ho. Ɛwom, Habel ne onipa a ɔto so anan a ɔbaa wiase de, nanso ɛbɛyɛ sɛ ɔno ne onipa a odi kan a Onyankopɔn hui sɛ ɔfata ogye. * Ɛda adi sɛ, bere a Habel renyin no, wannya onipa biara a ɔyɛ nhwɛso pa ansuasua no.
6. Ná Habel awofo te dɛn?
6 Ɛwom sɛ na nnipa baa wiase nkyɛe de, nanso na wɔn asetena abɛyɛ awerɛhow nkutoo. Ɛbɛyɛ sɛ Adam ne Hawa a wɔwoo Habel no yɛ nnipa a na wɔn ho yɛ fɛ na wɔwɔ ahoɔden nso. Nanso, wɔn ankasa hui sɛ wɔayɛ asoɔden paa. Bere bi, na anka wɔyɛ pɛ, na na wɔwɔ anidaso sɛ wɔbɛtena ase daa. Nanso, wɔtew atua tiaa Yehowa Nyankopɔn ma ɔpam wɔn fii Paradise fie a na ɛwɔ Eden turom hɔ no. Esiane sɛ wɔmaa nea wɔn ankasa pɛ ho hiaa wɔn kɛse sen biribiara, na mpo wɔannwen wɔn mma daakye ho nti, pɛyɛ ne daa nkwa bɔɔ wɔn.—Gen. 2:15–3:24.
7, 8. Bere a Hawa woo Kain no, asɛm bɛn na ɔkae, na ɛbɛyɛ sɛ dɛn na na ɛwɔ n’adwenem?
7 Bere a wɔpam Adam ne Hawa fii turom hɔ no, wohui sɛ asetena nna fam koraa. Ne nyinaa akyi no, bere a wɔwoo wɔn ba a odi kan no, wɔtoo ne din Kain, anaa “Nea Wɔawo No,” na Hawa kae sɛ: “Yehowa aboa me ma mawo ɔbarima.” Ebetumi aba sɛ “aseni” a Yehowa hyɛɛ bɔ sɛ ɔbɛba no nti na ɛmaa Hawa kaa saa. Yehowa kae wɔ turom hɔ sɛ ɔbea bi bɛwo “aseni,” na saa “aseni” no na na daakye ɔbɛsɛe owudifo a ɔdaadaa Adam ne Hawa no. (Gen. 3:15; 4:1) So Hawa adwene yɛɛ no sɛ ɔno ne ɔbea a wɔkaa ne ho asɛm wɔ nkɔmhyɛ no mu no, na Kain nso ne “aseni” no anaa?
8 Sɛ saa na n’adwene yɛɛ no a, ɛnde ɔdaadaa ne ho paa. Bere a Kain renyin no, sɛ Adam ne Hawa de saa adwene no hyɛɛ ɔno nso tirim a, ɛnde, na ebetumi ama wayɛ ahomaso. Akyiri yi, Hawa woo ɔbabarima foforo, nanso ɔno de, wanka asɛm papa saa amfa no ho. Wɔtoo ne din Habel, na ebetumi akyerɛ “Huhuw” anaa “Ahuhude.” (Gen. 4:2) Sɛ yɛhwɛ edin a wɔde too Habel no a, so na wɔn adwene yɛ wɔn sɛ Kain bɛyɛ onipa titiriw akyɛn Habel anaa? Ɛno de, yɛrentumi nka nsi no pi.
9. Dɛn na awofo a wɔwɔ hɔ nnɛ betumi asua afi yɛn awofo a wodi kan no hɔ?
9 Awofo a wɔwɔ hɔ nnɛ betumi asua pii afi saa awofo a wodi kan no hɔ. So w’ani begye ho sɛ wode w’anom nsɛm ne wo nneyɛe bɛma wo mma ayɛ ahantan, anibere, ne pɛsɛmenkominya? Anaasɛ wobɛkyerɛkyerɛ wɔn ma wɔadɔ Yehowa Nyankopɔn na wɔafa no adamfo? Nea ɛyɛ awerɛhow ne sɛ, awofo a wodi kan no anni wɔn asɛyɛde ho dwuma yiye. Nanso, na anidaso wɔ hɔ ma wɔn mma.
Ɛyɛɛ Dɛn na Habel Nyaa Gyidi?
10, 11. Adwuma bɛn na Kain ne Habel mu biara yɛe, na su bɛn na Habel nyae?
10 Ebetumi aba sɛ bere a mmarimaa baanu no renyin no, Adam kyerɛɛ wɔn adwuma a wɔbɛyɛ de aboa abusua no. Kain bɛyɛɛ okuafo, na Habel nso bɛyɛɛ oguanhwɛfo.
11 Nanso, Habel yɛɛ biribi a ɛho hia sen saa koraa. Bere bi akyi no, obenyaa gyidi—su pa a akyiri yi Paulo kaa ho asɛm no. Wo de, susuw ho hwɛ! Habel annya obiara a na obetumi ahwɛ no asuasua no. Ɛnde, ɛyɛɛ dɛn na onyaa gyidi wɔ Yehowa Nyankopɔn mu? Momma yensusuw adanse atitiriw abiɛsa a ɛbɛyɛ sɛ ɛno na ɛma onyaa gyidi no ho nhwɛ.
12, 13. Ɔkwan bɛn so na ɛbɛyɛ sɛ Yehowa abɔde a Habel hwɛe no boaa no maa ne gyidi yɛɛ den?
12 Yehowa abɔde. Ɛwom, Yehowa domee asase ma efifii nsɔe ne nnɛnkyɛnse, na ɛmaa kuadwuma yɛɛ den. Nanso, asase no tumi bɔɔ aduan pii maa Habel ne n’abusua nyaa nea wobedi. Nnomaa ne mpataa ne mmoa a aka de, Onyankopɔn annome wɔn, na saa ara nso na wannome mmepɔw, atare, nsubɔnten ne ɛpo. Wannome ɔsoro mununkum, owia, ɔsram, ne nsoromma nso. Baabiara a Habel bɛhwɛ no, na ohu adanse pii a ɛkyerɛ sɛ Yehowa Nyankopɔn a ɔbɔɔ nneɛma nyinaa no wɔ ɔdɔ ne nyansa kɛse, na ne papayɛ di mũ. (Monkenkan Romafo 1:20.) Akyinnye biara nni ho sɛ, saa nneɛma a Habel de anigye dwinnwen ho no na ɛmaa ne gyidi yɛɛ den.
Habel nyaa abɔde mu nneɛma a obegyina so anya Ɔbɔadeɛ a ɔwɔ ɔdɔ no mu gyidi
13 Ɛda adi sɛ Habel gyee bere dwinnwen Yehowa ho. Fa w’ani bu sɛ Habel rehwɛ ne nguan. Oguanhwɛfo nantew pii. Odi mmoa a wonni ahoɔden yi anim foro mmepɔw, fa mmonkyemmɔnka mu, twa nsubɔnten, na bere nyinaa ɔhwehwɛ baabi a nwura frɔmfrɔm wɔ, nsubura a nsu pii wom, ne baabi a obenya homebea pa ama wɔn. Wɔ Onyankopɔn abɔde nyinaa mu no, ɛte sɛ nea nguan paa na wonni ahoɔden, na wɔhyɛɛ da bɔɔ wɔn sɛ nnipa nhwɛ wɔn so na wɔmmɔ wɔn ho ban bere nyinaa. So Habel hui sɛ ɔno nso hia akwankyerɛ ne ahobammɔ fi Onyankopɔn a ɔwɔ tumi na onim nyansa sen nnipa koraa no hɔ? Akyinnye biara nni ho sɛ, ɔbɔɔ saa nneɛma no ho mpae pii, na ɛmaa ne gyidi kɔɔ so yɛɛ den.
14, 15. Nneɛma bɛn na Yehowa bɔhyɛ ahorow maa Habel nya dwinnwen ho?
14 Yehowa bɔhyɛ ahorow. Ɛbɛyɛ sɛ Adam ne Hawa kaa nsɛm a esisii wɔ Eden turom hɔ a ɛma wɔpam wɔn fii hɔ no ho asɛm kyerɛɛ wɔn mma no. Enti, Habel nyaa nneɛma pii a na obetumi adwinnwen ho.
15 Yehowa kae sɛ wadome asase. Habel huu nsɔe ne nnɛnkyɛnse a ɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn asɛm no aba mu. Yehowa san kae sɛ, Hawa bɛte yaw wɔ ne nyinsɛn ne n’awo mu. Bere a Habel maame rewo ne nuanom nkumaa no, ɛda adi sɛ Habel hui sɛ saa asɛm no nso aba mu. Yehowa ka too hɔ sɛ Hawa ani begyina ne kunu atra so, na Adam nso bedi no so. Habel de n’ani huu saa awerɛhosɛm no. Emu biara mu no, Habel hui sɛ Yehowa asɛm baa mu pɛpɛɛpɛ. Enti, na Habel wɔ adanse a edi mũ a ɛbɛma wagye adi sɛ Onyankopɔn bɔhyɛ a ɛfa “aseni” ho no bɛba mu ma daakye saa aseni no abeyi nneɛma bɔne a efii ase wɔ Eden no nyinaa afi hɔ.—Gen. 3:15-19.
16, 17. Dɛn na ɛbɛyɛ sɛ Habel sua fii kerubim a Yehowa somaa wɔn no hɔ?
16 Yehowa asomfo. Habel annya onipa biara a na ɔbɛyɛ nhwɛso pa ma wasuasua no, nanso na ɛnyɛ nnipa nko ne abɔde a wonim nyansa a wɔwɔ asase so. Bere a Yehowa pam Adam ne Hawa fii turom hɔ no, ɔhwɛe sɛ Adam ne Hawa ne wɔn mma no mu biara rennya kwan nwura saa asase so Paradise no mu. Yehowa de abɔfo a wɔwɔ dibea kɛse a wɔfrɛ wɔn kerubim, ne ogya nkrante a ɛretwa ne ho frɛdɛfrɛdɛ kɔwɛn turo no kwan ano.—Monkenkan Genesis 3:24.
17 Wo de, hwɛ sɛnea ɛbɛyɛ sɛ Habel tee nka bere a na ɔyɛ abarimaa na ohuu saa kerubim no. Ná wɔadan wɔn ho nnipa, enti yebetumi aka sɛ Habel hui sɛ wɔwɔ tumi kɛse. Ná “nkrante” a asɔ gya na ɛretwa ne ho frɛdɛfrɛdɛ bere nyinaa no nso bɛyɛ no nwonwa paa. Bere a Habel renyin no, wugye di sɛ ohui sɛ kerubim no abrɛ ma enti wɔafi baabi a wɔreyɛ wɔn adwuma no anaa? Dabi. Mmom, awia oo, anadwo oo, ohui sɛ abɔfo ahoɔdenfo a wonim nyansa yi kɔɔ so yɛɛ wɔn adwuma no mfe pii. Enti, Habel hui sɛ Yehowa Nyankopɔn wɔ asomfo a wɔyɛ adetrenee na wokura wɔn som adwuma mu pintinn. Habel huu biribi wɔ saa kerubim no ho a wanhu bi wɔ n’ankasa abusua mu; ohui sɛ kerubim no yɛ anokwafo na wotie Yehowa. Yebetumi aka paa sɛ nea abɔfo no yɛe no hyɛɛ ne gyidi den.
Wɔ Habel nkwa nna nyinaa mu no, ohui sɛ na kerubim no yɛ Yehowa asomfo a wodi nokware na wɔyɛ osetie
18. Nneɛma bɛn na yɛwɔ a ebetumi aboa yɛn ama yɛanya gyidi nnɛ?
18 Bere a Habel dwinnwen nea Yehowa ayɛ de ada ne ho adi nyinaa—nneɛma a wabɔ, ne bɔhyɛ ahorow, ne nhwɛso a n’asomfo a wɔyɛ abɔfo yɛe—ho no, ne gyidi kɔɔ so yɛɛ den. Habel nhwɛso no kasa kyerɛ yɛn. Nea ɔyɛe no nso betumi aboa mmofra paa. Wobetumi anya ahotoso sɛ, sɛ wɔannya obi a ɔyɛ nhwɛso pa wɔ wɔn abusua mu ansuasua no mpo a, wobetumi anya Yehowa Nyankopɔn mu gyidi a edi mũ. Yɛwɔ nneɛma bebree a ebetumi ama yɛanya gyidi nnɛ; ebi ne abɔde mu nneɛma a ɛyɛ nwonwa a atwa yɛn ho ahyia, Bible mũ no nyinaa a yɛwɔ, ne gyidi ho nhwɛso pa a nnipa pii ayɛ.
Nea Ɛmaa Habel Afɔrebɔ no Dii Mũ
19. Akyiri yi, ntease a edi mũ bɛn na Habel benyae?
19 Bere a Habel nyaa Yehowa mu gyidi kɛse no, ɔhwehwɛɛ ɔkwan a ɔbɛfa so ada saa gyidi no adi. Nanso, dɛn paa na na onipa desani betumi ayɛ ama amansan nyinaa Bɔfo no? Ɛda adi pefee sɛ, na Onyankopɔn nhia mmoa anaa akyɛde biara mfi nnipa hɔ. Akyiri yi, Habel benyaa ntease bi a edi mũ. Ɛne sɛ, sɛ ɔde adwempa de nneɛma a ɔwɔ no mu nea eye paa ma Yehowa a ɔyɛ n’Agya a ɔwɔ ɔdɔ no a, n’ani bɛsɔ.
Gyidi na Habel de bɔɔ afɔre; Kain anyɛ saa
20, 21. Dɛn na Kain ne Habel mu biara de bɔɔ afɔre maa Yehowa, na dɛn na ɔyɛe wɔ ho?
20 Habel yɛe sɛ ɔde ne nguan no bi bɛbɔ afɔre ama Yehowa. Oyii ne mmoa no mu mmakan no bi a wodi mũ paa, na okum wɔn de wɔn nam no afã a ɛyɛ akɔnnɔ paa no bɔɔ afɔre. Saa bere no ara nso, Kain boaboaa n’afuw mu nnuan ano sɛ ɔde rekɔbɔ afɔre ahwehwɛ Onyankopɔn anim dom. Nanso, na onni adwempa te sɛ Habel. Bere a anuanom baanu no de wɔn ayɛyɛde no kɔe no, nea na ɛwɔ obiara koma mu no bɛdaa adi.
21 Ɛbɛyɛ sɛ Adam mmabarima baanu no nyinaa sɔɔ gya bɔɔ afɔre no wɔ afɔremuka so, na ebetumi aba sɛ wɔbɔɔ afɔre no wɔ baabi a ɛbɛn kerubim no a saa bere no, na wɔn nkutoo ne Yehowa ananmusifo a wɔwɔ asase so no. Yehowa ma wohuu n’adwene! Yɛkenkan sɛ: “Yehowa ani sɔɔ Habel ne n’afɔre no.” (Gen. 4:4) Nea Onyankopɔn yɛ de kyerɛɛ anisɔ no de, Bible nka.
22, 23. Dɛn na ɛmaa Yehowa ani sɔɔ afɔre a Habel bɔe no?
22 Dɛn na ɛmaa Onyankopɔn ani sɔɔ Habel afɔre no? So nea ɔde bɔɔ afɔre no na ɛmaa n’ani sɔe? Ná Habel afɔrebɔde no yɛ abɔde a nkwa wom, na ohwiee ne mogya a ɛsom bo no gui. So Habel hui sɛ na afɔre a ɛte saa no bɛyɛ nea ɛsom bo? Habel wu akyi mfe pii no, Onyankopɔn kae sɛ wɔmfa nguammaa a wɔn ho nni dɛm mmɔ afɔre. Ná saa nguammaa no gyina hɔ ma ne Ba a ɔyɛ pɛ a wɔfrɛ no “Onyankopɔn Guammaa” a na obehwie ne mogya agu ama yɛn no. (Yoh. 1:29; Ex. 12:5-7) Nanso, ɛda adi sɛ na Habel nnim sɛnea Onyankopɔn de afɔrebɔ bedi dwuma daakye no ho hwee.
23 Nea yenim ne sɛ, Habel de nea ɔwɔ no mu nea eye paa na ɛbɔɔ afɔre no. Ɛnyɛ afɔre no nko na Yehowa ani sɔe, na mmom n’ani sɔɔ Habel ankasa nso. Ná Habel dɔ Yehowa, na na ɔwɔ ne mu gyidi paa; ɛno na ɛkaa no ma ɔbɔɔ afɔre no.
24. (a) Yɛyɛ dɛn hu sɛ nneɛma a Kain de bɔɔ afɔre no yɛ nea na ɛfata? (b) Ɔkwan bɛn so na nnipa pii a wɔwɔ hɔ nnɛ yɛ wɔn ade te sɛ Kain?
24 Kain annya no saa. ‘Kain ne n’afɔre no de, Yehowa ani ansɔ.’ (Gen. 4:5) Ɛnyɛ sɛ na nneɛma a Kain de bɔɔ afɔre no yɛ nea ɛmfata, efisɛ akyiri yi, Onyankopɔn Mmara maa kwan ma wɔde afuw mu nnuan bɔɔ afɔre. (Lev. 6:14, 15) Nanso, Bible ka Kain ho asɛm sɛ, na “n’ankasa nnwuma yɛ bɔne.” (Monkenkan 1 Yohane 3:12.) Kain nyaa adwene bi a nnipa pii kura nnɛ; ɛyɛɛ no sɛ, sɛ onya yɛ biribi de kyerɛ sɛ ɔresom Onyankopɔn a, na wawie. Ankyɛ koraa na ɔde ne nneyɛe kyerɛe sɛ onni Yehowa mu gyidi ankasa, na ɔnnɔ no nso.
25, 26. Kɔkɔbɔ bɛn na Yehowa de maa Kain, nanso dɛn na Kain yɛe wɔ ho?
25 Bere a Kain hui sɛ Yehowa ani ansɔ no no, so osuaa biribi fii Habel hɔ anaa? Dabi. Ɔfaa ne nua no ho tan. Yehowa huu nea na ɛrekɔ so wɔ Kain komam no, na ɔtɔɔ ne bo ase ne no susuw asɛm no ho. Ɔbɔɔ Kain kɔkɔ sɛ ɔkwan a ɔnam so no bɛma wayɛ bɔne a emu yɛ duru, nanso ɔkae sɛ sɛ Kain sesa n’akwan a, n’anim bɛba “nyam.”—Gen. 4:6, 7.
26 Kain antie kɔkɔbɔ a Onyankopɔn de maa no no. Mmom no, ɔka kyerɛɛ ne nua kumaa a na onnim adwene a wanya wɔ ne ho no sɛ onkogya no afum. Woduu hɔ no, Kain tow hyɛɛ Habel so kum no. (Gen. 4:8) Enti, yebetumi aka sɛ Habel bɛyɛɛ onipa a odi kan a ne som nti wɔtan no, na owui wɔ ne gyidi ho. Ná Habel awu de, nanso na Yehowa werɛ mfii no.
27. (a) Dɛn nti na yebetumi anya ahotoso sɛ Habel benya owusɔre? (b) Dɛn na yebetumi ayɛ na ama yɛahyia Habel daakye?
27 Ɔkwan bi so no, Habel mogya teɛɛm frɛɛ Yehowa Nyankopɔn hwehwɛɛ aweredi anaa atɛntrenee. Na Onyankopɔn nso maa atɛntrenee yɛɛ adwuma; ɔtwee Kain aso wɔ ne bɔne ho. (Gen. 4:9-12) Nea ɛho hia paa ne sɛ, Habel gyidi ho asɛm a ɛwɔ Bible mu no kasa kyerɛ yɛn nnɛ. Habel dii bɛyɛ mfe ɔha, na sɛ yɛhwɛ mfe dodow a na ne beresofo tumi di a, ɛnde na wannyin koraa; nanso ɔde nna a odii wɔ asase so no yɛɛ adepa. Ansa na ɔrewu no, na onim sɛ ne soro Agya Yehowa dɔ no, na ogye no tom. (Heb. 11:4) Enti, yebetumi anya awerɛhyem paa sɛ, Yehowa werɛ remfi Habel da, na ɔretwɛn sɛ ɔbɛsɔre afi awufo mu aba asase so paradise. (Yoh. 5:28, 29) So wubehyia no wɔ hɔ anaa? Sɛ wusi wo bo sɛ wubetie Habel na woasuasua ne gyidi a emu yɛ den no a, ɛnde wubehyia no.
^ nky. 5 Sɛ yɛka “wiase asefi” a, ɛkyerɛ aba a wogu anaa abawo; enti asɛm no fa nnipa a wodii kan woo wɔn no ho. Ɛnde, dɛn nti na Yesu anka Kain a wodii kan woo no no ho asɛm sɛ ɔtenaa ase fi “wiase asefi,” na Habel mmom na ɔkaa ne ho asɛm saa? Kain suban ne ne nneyɛe nyinaa kyerɛe sɛ ɔhyɛɛ da na ɔtew atua tiaa Yehowa Nyankopɔn. Sɛnea ɛtoo Kain awofo no, ebetumi aba sɛ ɔno nso rennya owusɔre mpo na kampɛsɛ wɔde ne bɔne afiri no.
Ɔkwan bɛn so na Habel kasa kyerɛ yɛn nnɛ?
Dɛn na awofo betumi asua afi mfomso a Habel awofo dii no mu?
Ɔkwan bɛn so na ɛbɛyɛ sɛ Yehowa abɔde, ne bɔhyɛ ahorow, ɛne kerubim no boaa Habel ma onyaa gyidi?
Nneɛma bɛn na wopɛ sɛ woyɛ de suasua Habel gyidi no?
Habel—“Ɛwom sɛ Wawu De, Nanso Ɔda so Kasa”